BBC Somali - Warar - Meles Zenawi oo lagu aasay Addis Ababa
Meles Zenawi oo lagu aasay Addis Ababa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 September, 2012, 14:07 GMT 17:07 SGA
Meles Zenawi waxa uu ahaa Ra'iisul Wasaarihii ugu wakhtiga dheeraa ee soo mara Ethiopia
Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Ethiopia, Meles Zenawi ayaa lagu aasay kaniisadda Cathedral-ka ee magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka.
Hoggaamiyayaal ka kala socday Afrika iyo caalamka intiisa kale ayaa ka qeybgalay aaskiisa, oo uu ka mid yahay Madaxweynaha Rwanda, Paul Kagame, oo sheegay in Mr Meles uu ahaa nin u huray wax uu ku tilmaamay aragtidiisi weyneyd ee horumarinta qaaradda Afrika.
Meles oo ahaa Ra'iisul Wasaarihii ugu wakhtiga dheeraa Ethiopia, ayaa waxa aaskisa isugu soo baxay tobanaan kun oo reer Ethiopia ah- oo qaar badan ay xirnaayeen shaarar madow oo Meles uu ku sawiran yahay.
Waxa ay isugu soo baxeen in ay u baroortaan Meles Zenawi, oo lagu tilmaamay inuu ahaa nin hoggaanka u hayay horumarka Ethiopia, laakiin sidoo kale lagu dhaleeceyn jiray xadgudubyo ka dhan ah bini'aadanimada.
Ninka beddelaya Hailemaruiam Desalegn ayaa xafiiska Ra'iisul Wasaaraha sii hayn doona ilaa doorashooyinka laguw ado inay dhacaan 2015.